Nav oo ayadna facebook isticmaasho si ay u hubiso macluumaadka qofka uu sheegay inay sax yihiin. - NorSom News
Nav oo ayadna facebook isticmaasho si ay u hubiso macluumaadka qofka uu sheegay inay sax yihiin.
Hay-ada shaqada iyo taakuleynta dadka aan shaqeynin ama howlgabka ah ee NAV ayaa la sheegayaa inay ayadna isticmaasho baraha bulshada sida facebooka iyo twiterka, si ay u hubiyaan macluumaadka ay dadku siiyeen inay yihiin kuwo sax ah iyo inkale. Waxyaalaha ay hubiyaana waxaa kamid ah sawirada uu qofku soo dhigay iyo qoraalada uu la qaybsaday asxaabtiisa facebooka. Hadii ay is keeni waayaana macluumaadka uu qofku siiyay Nav iyo kuwa ay Facebooka kasoo helaan, waxay sheegeen inay qofka ka jaran karaan kaalmada dhaqaale ee uu helo.
Laanta socdaalka iyo agaasinka soo galootiga ee UDI-da ayaa ayadu bilihii ugu danbeeyay ka dhigatay baraha bulshada meelo ay ka hubiyaan asalka qofka iyo macluumaadka uu siiyay inay sax yihiin. Waxaana jiro dad labaadateeyo gaarayo oo u badan soomaali oo sharciga magangalyada wadanka ku waayay waxyaalo ay ku qoreen baraha bulshada, gaar ahaan facebooga. Waxaana dadka dadkaas kamid Sadiq Farah Haibe oo nin dhalinyaro soomaali ah oo degan magaalada Drammen oo sababaha ugu waaweyn ee sharciga wadanka loogu diiday ay kamid yihiin waxyaabo uu ku qorey facebook darteed. Halkan ka daawo Sadiq oo arintaas cadeynaya
Sharci yaqaanada qaarkood ayaa ka deyriyay qaabkan cusub oo ay hay-adaha dowladu u adeegsanayaan baraha bulshada ee sosial-mediyaha. Iyaga oo sheegay in calaamad su aal xaga sharciga ah ay saarantahay in sawiro ama qoraalo laga soo helay facebooka loo isticmaali karo cadeymo ahaan. Sharci yaqaanada ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha ay dadka ku wadaagaan baraha bulshada loo fasiri karo qaabab badan, taas oo u fududeyn karta hay-adaha dowlada inay cadeyn u helaan shaki aan sax aheyn oo ay markii hore qofka ka qabeen. Intaas waxay ku dareen in arintan ay fududeyn karto in qofka laga been abuurto, isla markaana profil uusan laheyn inta la sameeyo lagu soo bandhigo sawiro iyo qoraalo uusan laheyn, taas oo keeni karta inay hay-adaha dowlada ay ku khaldamaan profilkaas. Iyaga oo tixraacaya magaca iyo sawirada qofka, balse aan xooga saareynin hubinta in profilka uu yahay mid sax ah.
Previous articleWiil soomaali ah oo sharciga loogu diiday facebook dartiis
Next articleBaarlamaanka Norwey oo isku raacay qorshe dhaqaalaha looga jari karo goobaha cibaadada